Proverb 146 Akohon-dRatsingoloka : izay ahitana afatotra . [Samson 1965 #A22]
Proverb 764 Avelao hitaha hahitana ny lesoka; avelao hamindra hahitana ny tsivaka . [Cousins 1871 #326, Houlder 1895]
Avelao hitaha hahitana ny lesoka , avelao hamindra hijerena ny tsivaka . [Rinara 1974 #355]
Avelao hitaha hahitana ny lesoka , aveloa hamindra hahitana ny tsivaka . [Veyrières 1913 #1754]
Proverb 1534 Aza tia vao, manary kolokolo hianao, ka ny nahitana no ariana . [Veyrières 1913 #1363]
Proverb 1894 Eo am-pandrasana no ahitana ny atiny. [Rajemisa 1985]
Proverb 2590 Isavasavana ny raviny hahitana ny fotony. [Veyrières 1913 #3251, Rinara 1974 #98, Abinal 1888]
Proverb 2592 Isika izao dia toy ny tantanana sy riandriana, ka ela nahitana ny mahamay . [Rinara 1974 #1451]
Isika tahaky ny tantanana sy riandriana : ela nahita ny mahamay . [Veyrières 1913 #5179]
Proverb 3184 Loharano nisehoana , kitapo nifonosana , harona niraiketana , angady nananana, vy nahitana . [Nicol 1935 #489]
Proverb 3526 Manantsody manira : manana ny maso ahitana ny kambana sy hanohizana ny maito . [Rinara 1974 #1981]
Manantsody manira : manana ny maso hahitana ny kambana sy hanohizana ny maito . [Veyrières 1913 #6188, Cousins 1871 #1524]
Proverb 3564 Manao izay tsy hahitana ka manofa lamba anatin' ny zavona . [Rinara 1974 #1997]
Manao izay tsy hahitana , ka manofa lamba anaty zavona . [Veyrières 1913 #3266, Cousins 1871]
Proverb 4700 Na hilevin-ko trandraka aza, na hanidin-ko vorona aza, aiza no tsy hahitako anao. [Veyrières 1913 #6479, Houlder 1895]
Proverb 5035 Ny faharetana no ahitana ny vokatra . [Veyrières 1913 #5293]
Proverb 6044 Raha indrindra ho hanim-biby ihany, aleo kaikerin' ny renin-tantely , fa ireny no ela nihinanana ny mamy , ary raha indrindra ho fatoram-bahy ihany, aleo fatoran' ovy , fa ireny no efa nahitana ny vokatra . [Rinara 1974]
Proverb 6745 Tahom- -boanjo : ka ny nahitana akifakifaka . [Veyrières 1913]
Tahom- -boanjo : ka ny nahitana akifikifika . [Veyrières 1913]
Tahom- -boanjo ka ny nahitana indray no akifikifika . [Rajemisa 1985 #43, Abinal 1888 #844, Veyrières 1913 #5478, Rinara 1974 #3990]
Tahom- -boanjo , ka ny nahitana no akifakifa . [Cousins 1871]
Tahom- -boanjo : ka ny nahitana no akifikifika . [Cousins 1871, Houlder 1895]
Proverb 7777 Tsy misy tombo sy hala : fa ny iray vy nahitana , ary ny iray angady nananana. [Cousins 1871 #3546, Nicol 1935 #181]
Proverb 8205 Vy nahitana sy fangady nananana . [Veyrières 1913 #1485]